Indlela yokwamukela nokuhambisa izivakashi
Izivakashi zingafika nganoma isiphi isikhathi, futhi kufanele zihlangane ngaso sonke isikhathi ngesithunzi, futhi lokhu, kufanele uvumelane, kuyinto yobuciko obuphelele. Ukulandela izincomo zethu ezilula, uzofunda ukuthi ungamukela kanjani futhi uhambisane nezivakashi ngokufanele futhi ngaphandle "komhlatshelo womuntu"!
Umqondo "wezivakashi" uvame ukuhlanganiswa nemiphumela yansuku zonke - intaba yonke yezingubo ezingavuthiwe, phansi okunyathelwe phansi kanye nezitembu eziyinkimbinkimbi kusuka ewayini etafuleni noma efafa. Kodwa akulona nzima kakhulu ukwamukela kahle izivakashi. Into esemqoka ukulandela imithetho elula mayelana nokuthi ungamukela kanjani futhi ubambe izivakashi.
Ikhodi yokugqoka iyakhethwa
Ucabanga ukuthi ubani ozobukeka enganaki - umdlali we-tutu we-ballet noma owesifazane oboyeni obusika ema-stilettos ngokumelene nesizinda sefulethini elijwayelekile? Ngaphambi kokuxwayisa izivakashi mayelana nekhodi yokugqoka kakhulu. Emibuthanweni yasekhaya, izingubo zansuku zonke zifanelekile kakhulu. Okukhethwa kukho okungcono - izingubo ezimbili "ezihambele" izivakashi. I-t shirt (ihembe) ne-blouse - ngosizo lwabo ungakwazi ukulawula ukushisa komzimba wakho ngokushisa kwefulethi.
Ngaphambi kokwamukela abantu, sikhathazeke ngezicathulo zokufaka esikhundleni. Yiqiniso, umkhosi wokwenza izivakashi ze-invitator slipper ungenakunqotshwa, kodwa ithoni enhle ayinalutho neze. Lokhu kubonakala kungekho ubuhle obuhle futhi abuhlanzekile. Ngakho-ke, nikeza izivakashi ngephansi elihlanzekile, noma unikeze enye inketho. Isibonelo, cela abantu abazovakashela ukuthatha izicathulo ezikhululekile ngaphandle kwezithende. Khumbula ukuthi izigqoko zingakwazi ukubhubhisa ngisho neparquet eqinile kakhulu eqinile phansi. Yebo, ama-moccasins noma izicathulo ze-ballet yiyona ndlela engcono kakhulu. Esimweni sesibili, ungathenga lonke lama-slippers angabizi angama-different of size futhi uthathe abantu ngaleli arsenal, ubanikeze ukukhetha kwama-slippers oyithandayo. Ngendlela, le nketho yokugcina ibhekwa njengeyona efanelekayo, ngoba izivakashi zingakwazi ukugqoka konke okukufunayo futhi akudingeki uzifake ngesicelo esihlazo sokuthatha izicathulo zokushintsha.
Thatha izivakashi kumele zihlome ngokugcwele. Ikakhulukazi liphathelene nokudla. Lokhu, uma kungenzeka, kufanele kube ngaphezulu kwezivakashi ezimbili. Izinhlobonhlobo zokubeka izitsha ngokudla, njengombuso, zibili. Esikhathini sokuqala - idili le-classic elinezilungiselelo eziphelele zetafula noma itafula le-buffet. I-Cocktail inezinzuzo zayo: ukudla kungabekwe ekhoneni etafuleni, ngaleyo ndlela ikhulule insimu yokudansa nokuzijabulisa. Izitsha zesikhathi esisodwa zingafakwa kuthebula le-buffet. Ngokwenza lokhu, ungenza kube lula kuwe ukuhlanza lapho izivakashi zihamba. Ngomkhosi, kumele usebenzise isevisi yokugubha. Ngaphambi kokudweba imenyu, ungakhohlwa ukubonisa isithakazelo ekuthandweni kokudla.
Imininingwane Yokungenisa Izihambi
Ukuze uqinisekise ukuthi izivakashi ungakhohlwa ukuthi azikho ekhaya, kodwa lapho uvakashele, kuyoba nenhlanhla uma ungevila kakhulu ukukhombisa isimemo ngesikhathi esiqondile sokuphela kweholide. Ngemuva kokubona izivakashi kufanele zibe ngokobuzwe, futhi ungaziphonseli kuzo zonke izindlela futhi ziyiqhinga lembundu. Unganqikazi kusengaphambili ukwazisa izivakashi ukuthi idili lizohlala, isibonelo, kuze kufike ku-6 futhi hhayi isikhathi eside. Ngendlela, ungasho ukuthi ngemva kwalesi sikhathi unezinto ezibaluleke kakhulu ezizayo ukuthi awukwazi ukukhansela.
Njengomthetho, izivakashi ezifundwe kahle zizofuna ukujabulisa umninindlu futhi zilethe okuthile kokudla. Akufanele uzifihle lesi sipho ekona elikude, faka isipho etafuleni, phakathi kwezitsha ezilungiselelwe. Ulethe izimbali - ngisho noma ungathandi neze, ngiyabonga ngokunaka kwakho futhi ungabonisi ukungajabuli kwakho. Yebo, uma izivakashi ziza ngezandla ezingenalutho, akusizi ngalutho kuwo wonke amathuba, njengokungathi ngengozi, ukuzikhumbuza ngalokhu ngamacebo avelele.
Kuze kube yisikhathi esilandelayo
Ukuze uhambisane nabantu kufanele kube njengokwenyuka njengomhlangano. Ungakhohlwa ukunikeza izivakashi isikhwama (izingubo zangaphandle) futhi ubambelele emnyango. Siyabonga ngokuthatha isikhathi futhi sikuvakashele, sikulethela lokhu kujabulisa okukhulu. Bonisa ukuthi uyajabula ukuphinde ubone. Khumbula, uzofunda ukubuka kahle izivakashi - futhi bazofuna ukuvakashela indlu yakho futhi. Into esemqoka ukwamukela nokuhamba nezivakashi ngokumomotheka!
Kungcono kakhulu ukugeza i-linoleum
Imibala nephunga ekhaya lakho
Ungakhetha kanjani izitsha zesikhathi esisodwa?
Ukugeza ngezinyawo: ukuthi kubaluleke kangakanani, kanjani ukukhetha, amathiphu
Indlela yokuhlukanisa isiliva esiliva
Izimfihlo zobuhle besifazane kanye nempilo
Indlela yokuhlangabezana nomnyaka omusha ekhaya
Isigqoko senkosikazi yanamuhla
Indlela yokuphuza itiye eluhlaza ukuze ulahlekelwe isisindo: Ngaphandle kwalezi zimfihlo ezingu-5 akukho lutho oluzovela
I-tonsillitis: ukwelashwa ngamakhambi abantu
Yenza isilingo: umshini womshado womakoti
Imiphumela yokulungiswa kwe-laser
Umyeni washiya. Ungabuyisela kanjani?
Ungadliwa izitsha zokukhanya ezivela emazweni ahlukene emhlabeni
Kunalokho i-herpes iyingozi ngesikhathi sokukhulelwa
Indlela yokuphuma enkingeni yezomnotho
Ukugcoba ngesithombo kanye ukhilimu omuncu
Indlela yokupheka ukolweni kakolweni
I-Snese Fruit Snake